အိမ်ထောင်ပရိဘောဂနှင့် ဥယျာဉ်ပန်းခြံပစ္စည်းများ - the whole set of table teak Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂနှင့် ဥယျာဉ်ပန်းခြံပစ္စည်းများ classified: အသုံးပြုပြီး The whole set of table Teak
Moving Out Sale The whole set of table Teak Furniture : one table, two chairs and one long chair for two persons , good - looking ,antique and high quality Price - 300,000 MMK ( Fixed Price) Condition - working perfectly fine but the table needs to be polishedabit if you want more good looking one, very suitable with Yangon humid weather . Place - Sanchaung nearby Gwa Market. Contact - 09 420 1866 35 or PM ကျွန်းစားပွဲ တစ်စုံ ရောင်းရန်ရှိ စားပွဲ တစ်လုံး ၊ တစ်ယောက်ထိုင်ခုံ နစ် ခုံနဲ့ နစ်ယောက်ထိုင်ခုံ တစ်ခုံ။ ဈေးနှုန်း - 300,000 MMK (fixed price ) ကျွန်းစားပွဲဆိုတော့ ထိုင်ရတာ ကျန်းမာရေးကောင်းပီး ရန်ကုန် ရာသီဥတုနဲ့ အ‌ရမ်း သင့်လျော်ပါ‌တယ် ။ နေရာ - စမ်းချောင်း ၊ဂွဈေးအနား ။ စိတ်၀င်စားသူများ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်နိင်ပါကြောင်း ။ ၀ယ်မယ်ဆို လာတော့ မပို့ပေးနိင်ပါ အရမ်းလေးလို့လေ ကိုယ်တိုင်လာယူပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်နော် ။